Kedu ka m ga-esi chọpụta ihe kachasị mkpa nke mkpụrụ obi ga-emeri maka Amazon?
Ịtọ ntọala kwesịrị ekwesị ma na-echebe mkpụrụ okwu kachasị mma maka Amazon nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa n'ime azụmahịa niile. Ihe bụ na nchọpụta nyocha dị omimi bụ kpọmkwem ihe nwere mmetụta dị mma maka ahịa gị. Nanị n'ihi na onye ọ bụla nwere ike ịchọta nwere ike ịpị ma zụọ gị - ọ bụrụ na ngwaahịa gị gosipụtara na ịchọta ịchọta ịchọta ebe ahụ. Ihe ọ bụla, ọ pụtara na ị ga-agafe ihe omimi nke ịmepụta ihe na-esonụ:
Ghọta nke ọma A9 search algorithm nke ụlọ ọrụ Amazon
Mara otú ị ga-esi kpughee ohere ọhụụ ọhụrụ na ihe nzuzo zoro ezo maka Amazon
Jiri nyocha ọchụchọ kwa ọnwa iji chọpụta ma dozie okwu ọchụchọ kachasị mkpa
Nyochaa na na-eme nchọpụta nyocha ajụjụ ogologo oge nke ndị ahịa na-azụ ahịa na-azụ online
Lekwasị anya na ịchọta nanị mkpụrụ okwu pụrụ iche maka Amazon Onye na-ere ere (a. k - peru tours. a.
Ka anyị lee ya anya ọzọ - ọ bụrụ na ịchọtaghị nsonaazụ gị dị mma n'ime ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ na ndepụta nke SERPs Amazon, ị ghaghị ikwughachi ya ugboro ugboro. nyocha ọchụchọ iji mee ka ha jee ozi mgbaru ọsọ gị. N'ụzọ dị otú ahụ, a bụ obere ntụziaka site na ntụziaka maka nduzi nke mkparịta ụka gị kachasị ọnụ maka ndepụta ngwaahịa Amazon nke kachasị mma ụzọ.
Nzọụkwụ Otu: Were nlekọta Mkpụrụ Mkpụrụ obi
Adịghị etinye oge gị na mgbalị gị n'ịmụta atụmatụ iche iche nke ngwaahịa gị / uru iji mezuo nghọta ya isi akụkụ nke arụmọrụ na iji eme ihe kwa ụbọchị. Ọ nwere ike ịdị ka onye na-enweghị ihe ọ bụla, mana ọ bụ akara ahụ nke ọma, n'ihi na ịhapụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ọbụna obere nchịkọta nwere ike iduga iwepụ otu akụkụ kachasị nke ndị ahịa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, tinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ onye zụtara ya, ma jiri nlezianya nyochaa nchọpụta kachasị mma nke nchịkọta niche gị / nke ndị otu.
Nzọụkwụ abụọ: Epeecha Clean & Clear Checklist
Nke a bụ mgbe oge ruru ka ịchọta ngwá ọrụ nyocha nke ọma ma ọ bụ ntanetị n'ịntanetị kpọmkwem ahaziri maka ọdịdị nke ndepụta kachasị nke isiokwu ịchọrọ maka Amazon. N'ụzọ dị otú a, echefula na ajụjụ Amazon na-atụ aro na akpaaka na njikọ ọchụchọ na-abawanye uru bara uru kwa. Na-ejide n'aka na ịmepụta ndepụta gị dabere na nyocha ọchụchọ, nhazi ọkwa nke asọmpi, na ịzụta ihe ebumnuche.
Nzọụkwụ nke atọ: Chọpụta Usoro Ogologo Oge Ogologo
Ugbu a, ọ bụ oge iji chọpụta nyocha ịchọta gị maka usoro ịzụ ahịa ogologo oge iji mee ka ọbụna ha zuo ezuo.Cheta, nke ka elu bụ olu ọchụchọ nke otu isiokwu, ọ ga-esiri ya ike ịkwado maka ya. Ọ bụ ya mere ị ga-eji zụlite ahịa dị elu karịa ya, ya mere, ị ga-enwe ike ịba ụba ntọghata, ị ghaghị ịmepụta ọchụchọ ndị a ma wepụ ndị nwere oke ọkwa asọmpi. Debe ihe kachasị na mkpirisi okwu ogologo-na ị mechara.